Dutchtown Proud in 2021 • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Dutchtown Proud ee 2021
Weli waad tahay Dutchtown Faan, sax? Waa inaad noqotaa! Xitaa iyadoo ay jirto dhibaato waddanka oo dhan ah, deriska la wadaago ee Dutchtown way isdhiibteen, is taageereen, xaafaddeenana horay u sii socdeen. Dhamaanteen waa inaan ku hanweynaa inaan aragno xaafadeena oo sii socota oo sii koraysa.
Sanadkii la soo dhaafay, waxaan dooneynay inaan soo bandhigno dareenka bulshada iyo wadajirka oo laga yaabo inaysan si fudud ugu muuqan dadka shisheeyaha ama kuwa ag maraya. In sidaa la yeelo, waxaan bilownay qaybinta Dutchtown Faan calaamadaha deyrka oo lagu beddelayo magaca-qiimahaaga ugu deeqa DT2 • Downtown Dutchtown. Ololuhu wuxuu ahaa mid guul weyn ku dhammaaday, iyadoo 200 oo calaamadood lagu qaybiyey dhammaan xaafadaha Dutchtown
Dalbo Saxeexaaga Dutchtown Proud
Waxaan dib ula soo noqoneynaa ololihii Dutchtown Proud ee 2021. Waxaan leenahay deris ka badan intii hore ee aan diyaar u nahay abaabulo baloogyadooda, nadiifi wadooyinka, ka qaybgal guddiyada, taageer ganacsiyadayada maxalliga ah, oo muujiya waxa ka dhigaya bulshada Dutchtown mid xoogan, adkeysi leh, diyaarna u ah inay la qabsato caqabadaha xaafadeena wajahaya. Aan u sheegno qof walba!
Hesho Saxeexaaga Kibirka ee Dutchtown!
Sannadkan, waxaan bixinaynaa isla heshiiska—dalbo calaamad, Magacaabi qiimahaaga, oo waxaan kuu imaan doonnaa mid (ama laba ama toban) adiga!
Waxaan soo jeedinaynaa tabarucaad ku dhow $ 15. Calaamadaha ayaa nooga baxay qiyaastii $ 5 midkiiba si aan u soo saarno-waana mahadsanid weyn Calaamadaha Farqiga Weyn iyo Sawirada si ay nooga caawiso inaan ka dhigno kuwan adag, ururada midowga ay sameeyeen calaamadaha la awoodi karo! Lacag kasta oo ka badan kharashka waxay toos ugu socotaa DT2 si looga caawiyo sii wadida shaqada dhisida guri u gaar ah, kala duwanaanta, iyo horumarka Dutchtown ee qof walba.
Ma awoodo $ 15 hadda? Dhib malahan. Xitaa waxaan ku siin doonaa mid bilaash ah. Kaliya u maro nidaamka dalabka, ku qor qiimahaaga $ 0, walina waan ku farxi doonnaa inaan yeelano deris kale oo muujinaya hankooda Dutchtown.
Saxeex Bilaash ah oo Dutchtown ah oo loogu talagalay joogtaynta deeqbixiyaasha
Ku cusub sanadka 2021, waxaan siineynaa calaamadaha Dutchtown Proud qofkasta oo noqda a deeq bixiyaha joogtada ah ee DT2. Diyaarso deeqdaada bil kasta soo noqnoqota waxaan kuu soo diri doonaa calaamad. Kaliya nala soo socodsii meesha aan dhigno.
Qaadhaan kastaa wuxuu caawinayaa- $ 5, $ 10, $ 25, ama $ 50 bishii waa waddo aad u dheer oo lagu taageerayo shaqada xiisaha leh ee DT2 ay qorsheysay 2021 iyo wixii ka dambeeya. Sannadkan, hadafkeennu waa inaan ururino $ 10,000 iyada oo loo marayo deeqaha joogtada ah. Iyada oo kudhowaad $ 3,000 horeyba loogu heley sanadka 2021, wali waxaan haysanaa wado dheer oo aan aadno, laakiin waxaan rajeyneynaa inaad naga caawin karto inaad halkaas na gaarsiiso.
Xagee Loo Maraa Lacagaha?
Ka dib markaad daboosho kharashyada calaamadaha, dhammaan natiijooyinka ayaa tagaya DT2 • Downtown Dutchtown, 501 (c) (3) horumarka bulshada aan faa'iido doon ahayn. Hadafka DT2 waa inuu dhiirrigeliyo bulsho kobcaysa iyo barwaaqo wadaag iyadoo la fududeynayo horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta fursadda xaafadda Dutchtown. Hadafkan, waxaan higsaneynaa inaan soo jiidanno lahaansho kala duwan, kor u qaadno meelaha, meelaha, iyo wajiyo, isla markaana aan u kordhino degitaanka
Waxaa la aasaasay 2005 iyadoo ah urur ganacsi oo xaafadeed, DT2 waxay had iyo jeer ku shaqeysaa miisaan kabo leh shaqaale dhan-iskaa wax u qabso ah. In 2020, waxaan awoodnay inaan shaqaalaysiino shaqaalaheena waqtiga-dhiman ah, Maamulaha Kobaca Dutchtown Jessica Payne. Jessica waxay keeneysaa khibrad sanado ah oo ku saabsan horumarinta xaafadaha iyo maareynta macaash doonka, xirfadaheediina waxay gacan ka geysanayaan soo uruurinta lacagaha, sugida deeqaha, qorsheynta mashaariicda, iyo soo jiidashada iyo xafidaada tabaruceyaasha.
DT2 ayaa dhowaan iskaashi la sameeyay Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri si ay uga qaybqaataan UrbanMain barnaamijka, waa barnaamijkii ugu horreeyay ee noocan ah ee ka dhaca Missouri. Marka la raaco habka afarta dhibic ee Main Street, DT2 waxay sameysay cusub gudiyo oo ay hogaaminayaan daneeyayaasha xaafadu inay si wax ku ool ah u qorsheeyaan mustaqbalka Dutchtown. Guddiyada ayaa durbaba qorsheynaya oo fulinaya mashaariic sida nadiifinta xaafadaha, barnaamijyada taageerada ganacsiga, iyo waxqabadyada lagu dhaqaajinayo Marquette Park.
Xitaa iyada oo leh awood xadidan oo si joogta ah loogu soo ururin karo shaqsi ahaan, sanadkii la soo dhaafay wuxuu keenay hawlgelin ka badan tii abid u dhexaysay DT2 iyo bulshada. Tabaruceyaal cusub, deggeneyaal cusub iyo kuwo waqti dheer qaatay, iyo ganacsiyo cusub oo la aasaasay ayaa sii wadaya kooxaysiga si ay u dhaqaajiyaan Dutchtown. Dutchtown waxay leedahay dardar aan horay loo arag.
Sii wad Dhismaha Dutchtown — Hel Calaamaddaada Maanta!
Haddii aad ku cusub tahay xaafadda, sheegashadaada ku dheji calaamada Dutchtown Proud! Haddii aad dhawaan dareentay dhiirigelin ku saabsan dareenka sii kordhaya ee bulshada ku soo kordhaya Dutchtown, muuji ruuxaas oo leh astaamaha Dutchtown Proud! Haddii calaamaddaadu qarxiso xilliga qaboobaha, hel calaamadda cusub ee Dutchtown Proud! Haddii aad rabto inaad ku muujiso midnimada gurigaaga, hel astaamo yar oo Dutchtown Proud ah lana wadaag deriskaaga!
Filimka hoos DT2. Muuji dhamaan qeybaha. DT2, Dutchtown, Iyo UrbanMain. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay April 4th, 2021 .
DutchtownSTL.org DT2 Dutchtown Proud ee 2021